महिलाहरूसँगको व्यवहारका कारण बिग्रेको बिल र मेलिन्डा गेट्सको दाम्पत्य जीवन :: Setopati
द न्यूयोर्क टाइम्स न्यूयोर्क (अमेरिका), जेठ ४
संसारकै धनाढ्यमध्येका र समाजसेवामा पनि नाम कमाइसकेका बिल र मेलिन्डा किन अलग भए? यसबारे भइरहेका अड्कलबाजी र चर्चा सेलाएको छैन। यसैबीच सार्वजनिक भएका केही घटनाले बिलको आनीबानीबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्।
हाकिम–कर्मचारीको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भएपछि यी दुईले कार्यालयमै प्रेमिल क्षणहरू साटे। कार्यालयभित्र विभिन्न अवसरहरूमा बिल मेलिन्डालाई 'फ्लर्ट' गर्थे। उनीहरू खुसुक्क भागेर कम्पनीको पार्किङ लट जाने गरेको मेलिन्डाले आफ्नो अन्तर्वार्तामा बताएकी छन्।
'यदि यो प्रस्तावले तिमीलाई असहज बनाउँछ भने सोच्नु कि यो सन्देश आएकै छैन,' बिलको उक्त इमेल पढेका एक जनाले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भने।
एकाध वर्षपछि बिल गेट्स 'गेट्स फाउन्डेसन' को तर्फबाट न्यूयोर्क गए। उनीसँगै फाउन्डेसनमा काम गर्ने एक महिला थिइन्। एउटा कक्टेल पार्टीमा जाँदा बिलले मधुरो स्वरमा उनको कानमा फुस्फुसाए, 'के तिमी मसँग डिनर जान्छौ?'
'अहिले अधिकांश महिलाहरू काम गर्छन्, तै पनि उनीहरूले यौनहिंसा र भेदभावको सिकार भइरहनुपरेको छ। हामी पक्षपाती र रुढीवादी व्यवहारले घेरिएका छौं,' टाइम पत्रिकाको एक स्तम्भमा उनले लेखेकी छन्।
त्यस्तै सन् २०१७ मा गेट्स दम्पतीका निकट सहकर्मी माइकल लार्सनले यौन उत्पीडन आरोप खेपेका थिए। लार्सन करिब ३० वर्षसम्म गेट्सको पैसा व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत छन्। उनले गेट्स दम्पतीको व्यक्तिगत र फाउन्डेसनको करिब १ सय ७४ अर्ब डलर लगानीबाट राम्रो कमाइ आर्जन गराएका थिए। यसको निम्ति 'क्यासकेड इन्भेस्टमेन्ट' मार्फत् सेयर, ऋणपत्र, होटल र ठूला खेतीयोग्य जमिनमा लगानी परिचालन गरिएको थियो।
त्यस्तै, 'र्‍याली क्यापिटल' भनिने भेन्चर क्यापिटल फर्ममा पनि उनीहरूको लगानी थियो। यसको अफिस क्यासकेडको स्वामित्व रहेको भवनमा थियो।
मेलिन्डासँग हालै कुराकानी गरेका एक व्यक्तिले भने, 'आफू जिन्दगीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले वैवाहिक जीवन छाड्नु नै उत्तम छ भन्ने उनले निर्णय गरेकी थिइन्।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ४, २०७८, १६:१५:००